မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များ ပင်ကိုယ်မူဟန်နဲ့ သဘာဝရဲ့စစ်မှန်မှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကာ "ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ကို Misss ခေါင်းလျှော်ရည်က ဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့ - MyStyle Myanmar
မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များ ပင်ကိုယ်မူဟန်နဲ့ သဘာဝရဲ့စစ်မှန်မှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကာ “ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ကို Misss ခေါင်းလျှော်ရည်က ဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့
Misss ခေါင်းလျှော်ရည်အနေနဲ့ အိုးမကွာအိမ်မကွာပဲ အပိုဝင်ငွေရှာချင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအတွက် “ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေ မိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်မူဟန်နဲ့ သဘာဝရဲ့စစ်မှန်မှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါမှာ Misss ဟာ တိုးတက်လာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ခေတ်ကာလလိုအပ်ချက်တွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အဓိကသင်ကြားရေးပိုင်းအတွက် အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Hla Day (လှတယ်) နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ Hla Day (လှတယ်) ဟာ မြန်မာလက်မှုပညာရှင်တွေအတွက် ရေရှည်တည့်တံ့တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေပြီး ဒီဇိုင်းနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုပါ ပို့ချပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူသူတွေအဆင်ပြေစေဖို့ကိုလည်း Misss က ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးများတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Viber မှာ Bot တစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပြီး ၎င်းကတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Bot ကို subscribe ထားရုံနဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ဘယ်သူမဆို အခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက် Misss Myanmar ရဲ့ Viber Bot ဟာ စတင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အချိန်ကစလို့ ၄ လ ကာလပတ်အတွင်း subscriber ဦးရေ ၅ သောင်းကျော်ထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ အရင်းအနှီးသိပ်မကုန်ပဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွယ်လင့်တကူရနိုင်တဲ့ သဘာဝကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီး လက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပုံတွေကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေအနေနဲ့ တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ “လေ့လာသင်ယူ ဝင်ငွေထူ Misss နဲ့အတူ” လို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေကနေမှ သဘာဝလက်မှုပစ္စည်းပြုလုပ်ပုံတွေကိုလေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ရောင်းချမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးငယ်တွေအနေနဲ့ ဝင်ငွေပိုလေးတွေရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းကပညာရှင်တွေက ပြည်တွင်းမှာရနိုင်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကိုပဲသုံးပြီး မြန်မာဘာသာနဲ့ သင်ကြားပေးတာကြောင့် ကုန်ကြမ်းရှာရခက်တဲ့ပြဿနာ၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲ စတာတွေနဲ့လည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။ လက်မှုဝါသနာရှင်တွေအဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လေ့လာမှုနှုန်းနဲ့ သင်ယူနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်ကိုတကူးတကသီးသန့်ဖယ်ထားဖို့မလိုတဲ့အပြင် သင်ခန်းစာမလိုက်နိုင်လို့ စိတ်ညစ်ရတာမျိုးလည်း မဖြစ်တော့ပါဘူး။ မိမိရဲ့သင်ခန်းစာနားလည်ကျေညက်မှုကို ဆန်းစစ်နိုင်မဲ့ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတိုလေးတွေကို ဖြေဆိုနိုင်ဖို့လည်း Misss က စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတိုတွေကို မှန်ကန်အောင်ဖြေဆိုပြီး certificate ရယူနိုင်တဲ့အပြင် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူတွေအဖို့ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ဖုန်းဘေလ်ဆုလက်ဆောင်တွေလည်း ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခဲ့တာကြောင့် လေ့လာသူတွေအတွက် ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လနှောင်းပိုင်းမှာ ဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့ သင်ခန်းစာအားလုံးကို အပြီးတိုင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်မှုပစ္စည်းပြုလုပ်နည်းတွေကို မျှဝေပေးပြီးချိန်မှာတော့ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်းတွေကို လူအများစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုရောင်းချမလဲဆိုတဲ့ ရောင်းချရေးနဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး (sales and marketing) ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပေးသွားဖို့ Misss က စီစဉ်ထားပါတယ်။ လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချရာမှာ ဘယ်အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုမလဲ၊ လုပ်ငန်းပေ့ချ်ကို ဘယ်လိုစီမံကိုင်တွယ်သင့်သလဲ၊ ထုတ်ကုန်တွေကိုအမြင်လှအောင် ဓါတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်မလဲ၊ လူအများစိတ်ဝင်စားအောင် ကြော်ငြာစာတွေကို ဘယ်လိုရေးမလဲ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်သွင်းပြောပြပေးသွားမဲ့ “ဝင်ငွေထူဖို့ မျှဝေကြမယ် Misss နဲ့ကွယ်” ဆိုတဲ့ virtual talk အစီအစဉ်ကို Misss Silky Smooth Shampoo Facebook Page ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့ ပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံး Viber Bot ထဲမှာရှိနေဦးမှာမို့ ဆက်လက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဒီအခမဲ့ပညာဒါနသင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူချင်တယ်ဆိုရင် Misss Myanmar Viber Bot ကို Viber မှာ “Misss Myanmar” လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရသလို ဒီလင့်ခ် (https://vb.me/misss_myanmar_bot) နှိပ်ပြီးလည်း ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရောင်းချရေးနဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပေးမဲ့ virtual talk အစီအစဉ်ကိုလည်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Misss ခေါင်းလျှော်ရည်ရဲ့ “ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေ မိမိတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်မူဟန်နဲ့ သဘာဝရဲ့စစ်မှန်မှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ရုံသာမက အိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့ အပိုဝင်ငွေရှာလာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2022-05-01T16:54:30+06:30May 1st, 2022|Exclusive|
Office Pre-installed ဆိုတာဘာလဲ? ဘာလို့ Office Pre-installed Laptop ကို ရွေးချယ်ဝယ် ယူသင့်တာလဲ?
ပရိသတ်အချစ်တော်များဖြစ်တဲ့ Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
Misss ရဲ့ “ပေါ်လွင်လှပ ပင်ကိုယ်သဘာဝ” အစီအစဉ်ကရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ၇ ခု
Park Shin Hye နဲ့ Choi Tae Joonတို့ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်လှပလွန်းတဲ့ မဂ်လာဆောင်ဓါတ်ပုံများ
အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ အကောင်းဆုံးစတင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်မယ့် Vostro 3000 Series Laptop